Psychology na mmekọrịta Ọrụ
Echiche onye ọ bụla maara banyere àgwà achụmnta ego, ya mere, onye ọ bụla na-aghọta na ọnụnọ ha na-enyere aka ọ bụghị nanị iji nweta ezigbo ọrụ, kamakwa ịkwaga n'ọkwá ọrụ.
Ọ bụrụ na anyị atụlekwuo nkọwa, àgwà achụmnta ego nke mmadụ bụ ikike nke onye ọrụ iji rụọ ọrụ ụfọdụ, nke kpọmkwem ihe ọkachamara ya na-ebute n'ihu ya.
Kedu ihe àgwà ndị ọrụ ahụ nwere:
ọkachamara - enwetara;
onwe - congenital.
N'ụlọ ọrụ ndị mba ọzọ, ọ dịwo anya a na-eme ya iji mee nyocha ihu igwe mgbe ị na-akwụ ụgwọ. Nke a dị mkpa iji mee ka onye nwere mkparịta ụka uche kachasị mma na ndị ọ ga - eme n'ọdịnihu mgbe ọ na - ahọrọ ọtụtụ ndị ga - aga nke ọma maka ịzụ ahịa.
Iji chọpụta ma mmadụ ọ ga-adaba maka ịga nke ọma na ọrụ ụfọdụ, ị nwere ike nyochaa iru eru ọrụ ya, nke gụnyere:
inwe ahụmahụ gara aga nke ndị ọkachamara na-arụ ọrụ n'ọhịa a;
ụfọdụ àgwà onwe - ala nke ahụike, mmekọrịta, na ihe ndị ọzọ.
Onye ọrụ ahụ nwekwara ike itinye ihe ndị ọzọ a chọrọ iji rụọ ọrụ maka ọrụ gị. Ọ nwere ike ịbụ ikike nke asụsụ mba ọ bụla ma ọ bụ ma ị nwere ikikere ọkwọ ụgbọ ala. Ụlọ ọrụ buru ibu na oge a nwere ọtụtụ ụzọ iji chọpụta njirimara achụmnta ego nke ndị na-aga ime maka ọnọdụ ụfọdụ. Ịtụle ihe ndị na-azụ ahịa nke onye ọrụ ahụ tupu ya akpọga ya n'ọrụ dị oke mkpa dị ka ịtụle ikike ọrụ ya ugbu a na usoro ọrụ ọrụ ya na ọrụ ọhụrụ.
Ụzụ na njirimara nke njikwa
Ọrụ nchịkwa ahụ pụtara ọnụnọ nke ọtụtụ ndị nọ n'okpuru, nke pụtara na onye njikwa ahụ nwere ike ịghọ onye ndu. Àgwà azụmahịa nke njikwa ahụ bụ, nke mbụ, nkà ya na ikike ya ịchọta ụzọ kachasị mma na ọnọdụ ahụ, ikike ịchọta ụzọ kachasị mfe na nke kachasị dị mkpirikpi iji nweta ihe mgbaru ọsọ ahụ chọrọ. Njirimara azụmahịa nke njikwa - njikwa bụ otu ụzọ azụmahịa na àgwà onwe onye.
Ụdị njirimara kachasị mma nke njikwa
Nsogbu - nguzogide - gosipụtara na nchịkwa zuru oke na ọnọdụ mberede.
Nkwenye onwe onye abughi isi nke onwe onye, ​​nke, o di, o bu nnukwu ihe n'iso ndi ozo.
Ọchịchọ ị ga-emeri bụ àgwà dabeere na mkpali maka ịga nke ọma. Ịchụso ihe ịga nke ọma nwere njikọ chiri anya na inwe obi ike onwe onye, ​​ebe ọ bụ na inweta ihe mgbaru ọsọ e setịpụrụ n'ihu ha na-eduga n'inwe ezigbo ùgwù onwe onye.
Creativity bụ ikike nke iweta ihe ọhụrụ n'ime usoro ọrụ iji kwado ya ma ọ bụ iji kpalie ndị nnọchiteanya.
Ntụle mmetụta uche bụ akụkụ dị mkpa nke onwe àgwà onye ndu ọ bụla. Ọ bụ ikike nke ịnọ jụụ n'ọnọdụ ọnọdụ.
Echiche ndị a metụtara àgwà achụmnta ego nke ma ndị ikom ma ndị inyom.
Ụdị ahịa ahịa ọjọọ
Àgwà ọma niile na-ebute nke ọma mgbe ị na-anabata ndị na-achọ ọrụ, ha niile dabere n'otú onye ahụ ga-esi jiri ya mee ihe. Dịka ọmụmaatụ, onye ọrụ nlekota oru nwere ike ịbụ ihe mkpuchi maka ya n'oge arụ ọrụ nke ọrụ ọrụ ya wee zobe onwe ya àgwà ndị dịka enweghị akwụwa aka ọtọ.
Ọrụ nwa oge, oge oge
Ikike nke ikike na njikwa - pro na cons
Enweta na bitcoins
Kedu otu esi eme onwe gi?
Njikwa agha na Òtù
Ikike dị mma
Olee otú ị ga - esi bụrụ nwanyi bara ọgaranya ma nwee ọganihu?
Kedu otu esi amalite azụmahịa site na isi?
Zeitnot - esi kpoo nrụgide oge, nkà na ụzụ nke njikwa ọgba aghara
Nkwụnye ego na ọlaedo - uru na ọghọm
Ntak emi kukumba epupụta wilt?
Kedu ihe ọkpụkpụ aka ekpe ji aka ekpe?
Kedu ihe ga-esi n'aka UAE?
Havortia - nlekọta ụlọ
Ime ụlọ obere ụlọ
Igosi ara ara
Ebe maka foto sessions
Paris Jackson mụtara na nne ya nwere cancer ... site n'akwụkwọ akụkọ!
Ebe Anibal Pinto
Mononucleosis ọrịa - ọgwụgwọ
Ọnụ ụzọ na enyo
Ezigbo ezé - esi ehichapụ ezé gị n'ụlọ ma ọ bụ na dentistry?
Ikwusi akwara hip - ọgwụgwọ
Mandy Moore ịlụ di na nwunye
Ime ụlọ ime ihe na Provence
Mma "obi ụtọ mmadụ" - esi elekọta ya?
Ọrịa nke ụkwụ
Echere maka kichin - echiche kachasị mma maka ịmepụta ime ụlọ
Mkpụrụ ndụ ọbara ọcha na - arịwanye elu na - emechi ahụ n'oge ime
Ngwakọta achịcha bisikasị n'ụlọ